Uphando noPhuhliso lwethu-Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
Uphando noPhuhliso lwethu
Imbali ezintsha zemveli Wenzhou Qiangzhong Oomatshini zingalandwa emva 1999. Ukusuka wokucoca ngesandla ecocekileyo-welding ukuya iwelding oluzenzekelayo ngokupheleleyo kunye ipolishi, ukusuka ukuphosa owomileyo ukuphosa amanzi, abantu Qiangzhong usoloko unyanzelisa ezintsha oluqhubekayo. Lo moya usikhokela kwicala lenkqubela phambili. Ayitshintshanga kude kube namhlanje. Wenzhou Qiangzhong
Kwinkqubo yemveliso engundoqo ye-bio-pharmaceutical, ukutya kunye nesiselo, ikhemikhali entle kunye namanye amashishini, inkqubo yeemodyuli inokukunciphisa ngokufanelekileyo ukungcoliseka kwemveliso kwinkqubo yemveliso kunye neendleko eziphezulu ezibangelwa yimpazamo yabantu. Oomatshini beQiangzhong basebenzisa isoftware ye-AUTOCAD kunye ne-3D kuyilo lobuchwephesha, ibonelela ngezisombululo zemodyuli kunye neenkonzo zobuchwephesha, kwaye inikezela ngenkxaso yokuqinisekisa ye-FDA kunye ne-GMP ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezikumgangatho ophezulu.
• Inkqubo yokuhlanjululwa kwenaliti yamanzi
Inkqubo ye-CIP / SIP
• Inkqubo yedosi
• Inkqubo ye-batching-proof batching-online
Iimpawu zokucoca indawo yangaphakathi ecocekileyo nengaphandle zibalulekile kwaye iimfuno zokucoca kufuneka ziqwalaselwe ngokupheleleyo ngexesha lesigaba sokuyilwa. Uyilo lwe-engile efileyo kufuneka luqwalaselwe ukuqinisekisa ucoceko kunye nokuzala.
Xa kuyilwa izikhongozeli ezicocekileyo, uQiangzhong Oomatshini basebenzisa iindlela zokuncedisa ikhompyuter ukulinganisa uluhlu lwee-CIP zokucoca iibhola ukuqinisekisa ukuba umphumo wokucoca uhlangabezana neemfuno zabathengi, kwaye isixa sokucoca ulwelo kuncitshisiwe ukunciphisa iindleko zomsebenzisi. Kubalulekile nokucoca umphandle wetanki. Umatshini weQiangzhong uqwalasela zombini ubuhle kunye nokusebenziseka xa kuyilwa itanki. Umphezulu wangaphandle kufuneka ube lula ukuwucoca kwaye kufuneka ukhuseleke kumsebenzisi.
• Iikona neekona zirhangqiwe
• Umphezulu ulungiswe ngokulinganayo ukuze unike ingxelo yokuhlola ekhazimlisiweyo
• Akukho zikhewu okanye zifotho
Iindawo ezingenamthungo kunye nezixhobo
Abantu abasi-8 kuphando nakuphuhliso